မန္တလေးတွင် အကြီးဆုံး MACHINE MART ဖြစ်သော ကျင်းလုံ- မြန်မာ စက်မှုပစ္စည်း အရောင်ဆိုင်သစ် ဖွင့်ပွဲတွင် ?? - Yangon Media Group
မန္တလေးမြို့တွင် အကြီးဆုံးဖြစ်သည့် ခေတ်မီအဆင့်မြင့် ကျင်းလုံမြန်မာ Machine Mart ကို မန္တလေးမြို့၊ ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ် ၇၃×၇၄ လမ်းကြား မြို့မဒင်္ဂါးလမ်းနှင့် မြို့မသစ်လွင် လမ်းကြားရှိ အရောင်းစင်တာတွင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ရာ ဖွင့်ပွဲတွင် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရ အဖွဲ့အား မီးသတ်ကားနှင့် ရေစုတ်စက်များ လှူဒါန်းကြောင်း သိရသည်။
ကျင်းလုံမြန်မာ MACHINE MART ဖွင့်ပွဲတွင် မန္တလေးတိုင်း တိုင်းဒေသကြီး၊ စည်ပင်သာယာရေးဝန်ကြီး၊ ဒါက်တာရဲလွင် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ လုံခြုံရေးနှင့် နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီး ဗိုလ်မှူးကြီး ကျော်ကျော်မင်း၊ စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီး ဦးမြတ်သူ New Starlight of Companies ဥက္ကဋ္ဌ ဦးကျော်ကျော်ဝင်း Kemage စက်ရုံမှ မန်းနေဂျင်းဒါရိုက်တာ Mr.Xu ကျင်းလုံမြန်မာ Machine Mart ၏ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးထွန်းလှိုင်နှင့် မန်းနေဂျင်းဒါရိုက်တာ ဦးဇော်လှိုင်ထွန်းတို့က ဖဲကြိုးဖြတ်ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့ကြပြီး ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်က ကျင်းလုံမြန်မာ Machine Mart အား စက်ခလုတ်နှိပ် ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့သည်။
ဖွင့်ပွဲအပြီးတွင် ကျပ်သိန်း ၃၂၀ တန် မီးသတ်ကားနှင့် ကျပ်သိန်း၂၃၀ တန် မီးသတ်ကားနှစ်စီးနှင့် ကျပ်သိန်း ၁၅၀ တန် ရေစုတ်စက် တစ်လုံးတို့အား ကျင်းလုံမြန်မာ MACHINE MART မှ ပေးအပ်လှူဒါန်းရာ ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်နှင့် တာဝန်ရှိသူများက လက်ခံရယူကြသည်။မန္တလေးမြို့တွင်ဖွင့် လှစ်သည့် စက်မှုလုပ်ငန်းသုံး ပစ္စည်းမျိုးစုံရောင်းချမည့် ကျင်းလုံမြန်မာ MACHINE MART မှာ မန္တလေးမြို့ သာမက အခြားပြည်နယ် တိုင်းဒေသကြီးများကပါ အလေးထား ဝယ်ယူရမည့် လက်လီလက်ကား ခေတ်မီအဆင့်မြင့် အရောင်းစင်တာကြီးဖြစ်သည်။ ဖွင့်ပွဲ အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် စက်ပစ္စည်း ၁၁ မျိုးကို အရေအတွက် အကန့်အသတ်ဖြင့် အမှတ်တရ လက္ကား အထူးလျှော့ဈေးဖြင့် ရောင်းချပေးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
မြန်မာ - အိန္ဒိယနယ်စပ်ရှိ တမူးကုန်သွယ်ရေး စခန်း၏ ပို့ကုန်ပမာဏ သိသာစွာ တိုးတက်၊ ပြီးခဲ့သည့် ဘ?
ရှိုင်းသူရ၊ မျိုးကိုထွန်း၊ အေဇင်မှူးတို့ကို ပဏာမမြန်မာ့ လက်ရွေးစင် ယူ – ၂၃ အသင်း ပြန်လည်စေလွှ?
ဖားကန့်တွင် သက်တမ်းကုန်လုပ်ကွက်ကမ်းပါးယံပြိုကျမှုကြောင့် ခြောက်ဦးသေဆုံးခဲ့
ရှစ်လေးလုံး (၃၁)နှစ်ပြည့် အခမ်းအနားတွင် လက်ရှိနိုင်ငံရေးကို ထင်ဟပ်စေမည့် ကြေညာချက် ထုတ်မည်
မောင်တောတွင် ရခိုင်အမျိုးသားတစ်ဦး ဘင်္ဂါလီများ၏ ဓား၊ သံတုတ်များဖြင့် တိုက်ခိုက်ခံရမှုကြောင
ခရီးသွားမြှင့်တင်ရေး အစီအစဉ်တစ်ရပ် အဖြစ် ကန်ပက်လက်မြို့ရှိ နတ်မတောင်၊ တောင်တက်လမ်း တစ်လှေ
လိုင်စင်မဲ့ ဆိုင်ကယ် ဆိုက်တွဲများကြောင့် သုံးဘီးဆိုင်ကယ် မောင်းသူများ အခက်ကြုံနေ